Google na aru oru n’ime VR nke Chrome maka Android | Gam akporosis
Google na-akwadebe VR nke Chrome maka gam akporo
Ezigbo eziokwu bụ na-eme nnukwu nzọụkwụ afọ a na usoro nke ngwaahịa sitere na ndị ọhụụ kaadiboodu ọhụụ ma ọ bụ Samsung's Gear VR, ka nhọrọ ndị ọzọ bara ọgaranya dịka HTC's Vive na Oculus Rift. Nhọrọ dị ọnụ ala ma dịkwa oke ọnụ iji nwee ike ịnweta eziokwu dị adị nke mepere ụwa ndị ọzọ na ahụmịhe ndị ọzọ.
Ma nke ahụ bụ na ịnwe ike ịgafe kaadiboodu iji nwee ike ile vidio dị n'eziokwu, n'oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike ịchọpụta web sitere na onye nlele dị ka nke Google. Ndị na-ahụ maka ugwu na-arụ ọrụ na VRdị Chrome VR maka gam akporo, dika edepụtara na Chrome Beta na Chrome Dev na-ewuli maka gam akporo.
Chrome Beta gụnyere ntọala WebVR nke na-enye onye ọrụ ohere inyocha weebụsaịtị iji na VR, ebe Chrome Dev nwekwara VR shell nke ga - enyere gị aka iji kaadị Cardboard na DayDream mee nchọgharị na ntanetị, ọbụlagodi ndị na-adịghị njikere maka eziokwu dị adị. Uzo o si aru oru ugbu a, i gha ewepu kaadiboodu ma oburu na webusaiti nke ichoroghari VR adighi njikere.
VR Shell na Chrome Dev adịchaghị njikere maka ojiji, nke a bụghị ihe ijuanya ebe ọ bụ na a na-eji ngwa Chrome Dev iji nwalee atụmatụ dị na steeti alpha. Eziokwu ahụ bụ na shei VR dị na Chrome Dev na-egosi na Google dị na-arụsi ọrụ ike n'ihi na nke a mma na-adị mgbe mbụ DayDream ọnụ na-abata na njedebe nke afọ si emepụta dị ka Huawei. Google na-arụkwa ọrụ na ịgbakwunye nkwado Chrome maka Oculus Rift na HTC Vive.
Nkwado maka nchọgharị weebụ na VR pụtara na ewezuga ihe mmadụ na-eme mgbe ọ na-eche banyere eziokwu dị adị, ọ ga-agbakwunye ihe na-atọ ụtọ isi nke mmasị maka ndepụta atụmatụ site na DayDream.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google na-akwadebe VR nke Chrome maka gam akporo
Google kwadoro na Nougat bụ Android 7.0 na vidiyo bipụtara
HTC 'Marlin' Nexus nkọwa na-leaked: 5,5 QHD ihuenyo na 4GB nke Ram